दिल्ली उपचारबारे कमरेड केपी ओली (कृष्णज्वाला देवकोटा) - [2005-12-05]
पछिल्ल्ाा पाँच वर्षमा माधव नेपाल र तपाईंको स्वास्थ्य कहिल्यै एकैपटक सप्रेन र बिग्रेन । जब उहाँ स्वस्थ देखिनुहुन्थ्यो, तपाईं बिरामी हुन थाल्नुहुन्थ्यो । अनि, तपाईं अलि स्वस्थ देखिन थाल्दानथाल्दै उहाँको स्वास्थ्य बिग्रन थाल्थ्यो । अहिले अचानक के चमत्कार भयो र दुवै एकैपटक अस्वस्थ हुनुभयो ?
यसमा कसैले डेढ अक्कल लगाउन जरुरी छैन । सिद्धान्तनिष्� र सङ्ग� ित पार्टीमा हाछ्युँ पनि पार्टीका सबै स्थायी कमिटी सदस्यलाई एकैपटक आउन सक्छ । टप टू बटम एकता भनेको के हो ? यही हो ।
बिरामी हुनुभयो, यहाँसम्म � ीकै हो । तर, जँचाउन किन भारत नै जानुभयो ?
भारत नै किन गएको, बर्मा वा श्रीलङ्का किन नगएको, मोरिसस भन्ने पनि त देश छ नि भन्ने प्रश्नको कुनै तुक छैन । तपाईं बुद्धलाई जुम्ला गएर तपस्या नगरेर भारत किन गयौ भन्न सक्नुहुन्छ ? सीता कुनै हु सुन फुनसँग बिहे गरेर चीन किन नगएकी, रामसँग बिहे गरेर भारतै किन गएकी भनेर यस देशमा अहिलेसम्म कसैले प्रश्न गरेको छ ?
तपाईंलाई समस्याचाहिँ के थियो ?
अलि फरक खालको समस्या थियो । जता जान मन छ, त्यस दिशामा खाल्डै मात्र थपिने, जुन बाटो हिँड्नै मन छैन, त्यो बाटो भने पिच हँुदै जाने । आफू सिंहदरबारतिर हिँड्यो, आफूमुनिको जमिन भने रोल्पातिर सर्ने । जोसँग हात मिलाउन मन छ, त्यसले मुट्� ी नै नखोल्ने, जसको अनुहारसम्म हेर्न मन छैन, त्यो भने अँगालो मार्न आइपुग्ने । जसलाई चेतावनी दियो, त्यही हाँस्ने । जेहोस्, उपचार गरियो राम्रै भयो । डाक्टर, नर्स सब एकसे एक प्रतिभाशाली रहेछन् । एक्सरे रिपोर्ट चाहियो भनेर कपडा खोल्दै थिएँ म, पहिल्यै रिपोर्ट दिए । हाम्रो केस हिस्ट्रीबारे हामीलाई भन्दा उनीहरूलाई बढी थाहा रहेछ । हामीलाई के रोग लाग्यो, किन लाग्यो, के रोग लाग्न सक्छ, किन लाग्न सक्छ, कहिलेसम्म लाग्न सक्छ, सब कण्� ।
के भने त डाक्टरले ?
मेरो रगतमा अलि बढी सत्ताग्लोबिन भेटियो भन्थे । माधवजीको पनि त्यही समस्या रहेछ तर मेरोभन्दा अलि बढी । गिरिजाबाबुको त कुरै नगरौँ । उहाँको रगत जाँच्दा ग्लोबिन नाप्ने मेसिन नै पड्क्यो भन्ने हल्ला थियो ।
माओवादीसँग पनि भेट भएछ, होइन ?
खै, भयो भन्नुपर्‍यो । यो पाला यस्तै भयो । संयोग नै त्यस्तो पर्‍यो । भयो के भने हामी पशुपतिको जात्रा सिद्राको व्यापार गरौँ भनेर ११९ नम्बर बस चढेर जहाँगिरपुरीबाट कुतुबमिनार हेर्न जाँदै थियौँ । यसो हेरेको त छेउमा पहिले कताकता देखेजस्ता मान्छे उभिएका रहेछन् । कता देखेको भनेर सोच्दा सोच्दा सोच्दा थाहा भयो, यी त माओवादी हुन् । यसरी अचानक माओवादीहरू भेट भए । हामीलाई भने तिनको अनुहारसम्म हेर्न मन भएन । हतियार नबिसाएसम्म यिनीहरूको अनुहार पनि हेर्दैनौँ भनेर निकैबेरसम्म अन्तै फक्र्यौं । तर, त्यसरी धेरैबेरसम्म विपरीत दिशातिर मुन्टो बटार्दा हाम्रो गर्धन दुख्यो । के गर्ने, हाम्रो पनि गर्धन छ र त्यो दुख्छ ।
पछि कसरी संवाद सम्भव भयो त ?
पछि तिनले झोला बिसाए नि ! झोला बिसाउनुको अर्थ हतियार बिसाउनु भयो कि भएन ? स्वस्थानीमा भनेको छ नि, छोरा नभए मीतछोराले काम चलाउनु । हामीले मीतछोराले काम चलायौँ ।
राजासँग पनि संवादको अन्तिम सार्थक प्रयास त गर्न सकिन्थ्यो ....
ए बाबा, कति प्रयास भयो, भयो । नागार्जुनमा, नारायणहिटीमा, शीतलनिवासमा । हरेक भेटमा राजा हाम्रा गुनासालाई सत्यनारायणको कथा जसरी सुन्थे । बडो आशा जाग्थ्यो । बाहिर निस्क्यो, कार्यकर्तालाई धाप मार्‍यो, पत्रकारलाई रहस्यमय नजर लगाएर, तिनका आँतमा कुत्कुती लगाएर मोटर चढ्यो र घर आएर नेपाल टेलिभिजन हेर्‍यो, अर्कै समाचार आउँछ ।
अमेरिकी राजदूत अझै राजा र दलले नै हात मिलाउनुपर्ने पक्षमा देखिनुहुन्छ । तपाईंहरूले त अर्कै बाटो समाउनुभयो नि ?
हामीले बाटो समाएका
होइनौँ, बाटोले हामीलाई समायो भन्नोस् । अमेरिकी राजदूतको कुरा किन, हामी पनि राजासँगै हात मिलाउने पक्षमा छौँ । सोचौँ न, राजासँग हात मिलाउन हामीलाई के आपत्ति हुनसक्छ ? कस्ता-कस्तासँग त मिलाइयो, राजासँग मिलाउँदा त हातकै सान बढ्छ नि ! तर, मिलाउने भनेर तेसार्दातेसार्दै हाम्रो हातै चल्न छोडिसक्यो तर राजा मुट्� ी नै खोल्दैनन् । बन्द मुट्� ीसँग हात कसरी मिलाउनु ? हामी वास्तवमा त्रासदीको सिकार भएका छौँ, भयानक त्रासदीको । हामी रोल्पाबाट सकेसम्म टाढा हुत्तिन चाहन्छौँ तर अचम्म के भइरहेको छ भने हामी जुन राजनीतिक जमिनमा उभिएका छौँ, त्यो क्रमशः रोल्पातिर सरिरहेको छ । यस्तो किन भइरहेको छ, हामी आफैँले � म्याउन सकेका छैनौँ ।
माओवादीप्रति विश्वास छ ?
त्यति टाढा किन जानुहुन्छ ? -साउतीको भाकामा) नढाँटी भनौँ, मलाई माधव नेपालजीमै विश्वास छैन । तर, के गर्ने ? -लामो सास तान्दै) राजनीतिमा न विश्वास गरेर साध्य हँुदोरहेछ, न अविश्वास गरेर । हेरौँ के हुन्छ !
(नोट ः पा� कवृन्द, यो अन्तर्वार्ता एउटा अनुमान हो । तर, मलाई विश्वास छ, कमरेड ओलीले पनि यसलाई अनुमान मान्न सक्नुहुने छैन ।)